Izindlu Ezithengiswayo - Clickfor.net | Ibhulogi Yezihambeli | Thumela ibhulogi yesivakashi
Izindlu ezithengiswayo umdlalo wokwethenjwa, futhi le trust iza nokwethulwa okuhlaba umxhwele kwendawo ngendlela ephoqayo. Ukuthengisa ngevidiyo kuthola udumo olukhulu ngenxa yekhono lamavidiyo okukhombisa umkhiqizo njengoba unjalo. Njengoba umhlaba uya phambili, abantu sebeqalile ukucinga noma yini aba... Funda kabanzi
7 Amathiphu Asebenzayo Okuthengisa Indlu Ngokushesha
Izindlu zomndeni owodwa e-US zithengiswa ngesilinganiso sama-$496,900. Nakuba indlu yakho ingase ithole inani elihle, kungase kuthathe isikhashana ukuthi iphume emakethe, ikakhulukazi uma uhlala endaweni ethile lapho isidingo singekho phezulu kakhulu. Kodwa uma uhlakaniphile ngakho, futhi wenza umzamo, ikhaya ... Funda kabanzi
Ungathola Kanjani Uma Iphrojekthi Yakho Yasekhaya Ibhalisiwe I-RERA
Nakuba ukuba nendlu kuyiphupho labaningi, kungase kuphenduke iphupho elibi uma othile ewela ogibeni lwabakhi abangathembekile. Ukubhekana nezikhalazo zabathengi bezindlu kanye nokuvikela intshisekelo yabo, uhulumeni uqhamuke noMthetho Wezakhiwo (Regulation and Development) Act, 2016, owaziwa nangokuthi i-RERA. Iqale ukusebenza kusukela ku-1st ... Funda kabanzi
Uzehlisa Kanjani Izindleko Zakho Zokusebenza
Ngezinye izikhathi, kulula ukukhohlwa ngezindleko zokuphila. Sivame ukwenza izinqumo ezisekelwe kulokho esikufunayo esikhundleni salokho esikufisayo noma okungabizi kakhulu. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi izindleko zensiza zifana nanoma yiziphi ezinye, futhi zingaba phezulu kakhulu. Nazi izindlela ezimbalwa zokunciphisa ukusetshenziswa kwakho... Funda kabanzi
Abathengisi Bangathola Izinzuzo Zemakethe Yezindlu yango-2021
Ngenxa yobhadane lwe-COVID-19, unyaka ka-2020 ube unyaka ongaphansi kokuthela kwabaningi. Ngenkathi abanye belungiselela omunye unyaka okhiqizayo, leli gciwane ngokuqinisekile lamisa izinhlelo eziningi. Uma uyeka imizamo yakho yezindlu zangempela ngonyaka odlule, manje kungase kube isikhathi esikahle sokucwilisa izinzwane zakho emanzini. E... Funda kabanzi
Izindlela Eziyi-9 Zokwakha Ibhizinisi Ngaphandle Komhlaba Ongenalutho
Umhlaba ongenalutho ungase ungabi uhlobo lokuqala lwempahla olufikayo engqondweni yakho uma ucabanga ngokutshalwa kwezindlu nezakhiwo. Kodwa akufanele usheshe ukuyibhala. Ziningi izindlela zokusebenzisa umhlaba ongenalutho ukwakha ibhizinisi noma ukukhulisa indlela engenayo! Phela umhlaba uguquguquka kakhulu. Nge... Funda kabanzi
Izixazululo Ezilula Zokwenza Ukuhamba Kubelula
Bambalwa abantu abajabulela inqubo yokusuka kwelinye ikhaya baye kwelinye. Kuthatha isikhathi esiningi, umzamo, kanye nemali ukuze ukhiphe lokhu. Ngenxa yalokhu, abantu abaningi bazogwema ukunyakaza ngokuphelele ngaphandle uma kunesidingo. Ngeshwa, ngezinye izikhathi le nqubo ayinakugwema. Ngenxa yalokhu kungenakugwema, kubalulekile ukusebenzisa amasu athile ukuze... Funda kabanzi
Amathiphu Okuvuselela Indlu Yakho Kahle Kodwa Ngomnotho
Ikhaya lidinga ukulungiswa njalo ngoba ukulungisa kusiza ukwenza ikhaya libukeke lilihle kakhulu. Ungase ucabange ngalesi sikhathi ngokuqasha usonkontileka noma ukwakha isifundo sakho. Hhayi-ke, kungakhathaliseki ukuthi usembonini yokwenza izinkuni noma uthanda ukwenza i-DIYing indlu yakho, ungenza i-makeover ngokwakho. Kunezinto ezahlukahlukene ezisiza ukwenza ... Funda kabanzi
Idizayina Amathiphu Okuguqula Impahla Yakho Ethengiswayo Iyenze Ikhaya Olithandayo
Ngaphandle kokuthenga imoto, ukuthenga indawo ethengiswayo kungenye yezimali ezibaluleke kakhulu ozozenza empilweni yakho. Lokhu kutshalwa kwezimali kuzodinga isikhathi esiningi nemali kuwe - udinga ukunquma ngokucophelela ukuthi iyiphi indawo ongayithenga futhi wonge imali eningi ukuze ukwazi ukuyikhokhela.... Funda kabanzi
Kungani Udinga Ukuhlolwa Kwendawo Yendawo Yesigaba I?
Akumangazi ukuthi ukutshala imali ebhizinisini lokudayiswa kwezindlu kuhlala kunzima futhi kuyingozi. Kodwa-ke, imbuyiselo ekutshalweni kwezimali okuhambisanayo incike ezintweni ezimbalwa njengokushintsha kwevelu yemakethe, indawo, imigomo yemalimboleko, abaqashi, izingozi zemvelo, uhlobo lwenhlabathi, nokunye okuningi. Phakathi kwalezi zici, enye yezingozi ezinkulu ezihambisana... Funda kabanzi